မြန်မာရေလုပ်သား ခြောက်သောင်းကျော်ကို တရားဝင် စေလွှတ်ပေးရန် ထိုင်းအလုပ် သမားဝန်ကြီး ကမ်းလှ?? - Yangon Media Group
မြန်မာရေလုပ်သား ခြောက်သောင်းကျော်ကို တရားဝင် စေလွှတ်ပေးရန် ထိုင်းအလုပ် သမားဝန်ကြီး ကမ်းလှ??
ထိုင်းငါးဖမ်းစက်လှေလုပ်ငန်းများအတွက် မြန်မာလုပ်သား ၆ဝဝဝဝ ကျော် တရားဝင်စေလွှတ်ပေးရန် ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးက ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ သြဂုတ် ၁၆ ရက် နေပြည် တော်အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီး ကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးရုံးတွင်ပြုလုပ်သည့် ထိုင်း-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံဝန်ကြီးအဆင့်အစည်း ဝေးတွင် ထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်သမား ဝန်ကြီး Mr. Adul Sang singkeo က အထက်ပါအတိုင်းကမ်းလှမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ကျွန်တော်တို့ရေလုပ်သား ခြောက်သောင်း လူဦးရေလိုအပ်မှု ရှိပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး လာ ရောက်အကူညီတောင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအလုပ်သမားတွေကို MoU စနစ်နဲ့ခေါ်ယူနိုင်အောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်”ဟု ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီး Mr. Adul Sang singkeo က ပြောသည်။ MoU ဖြင့်ခေါ်ယူမည့် မြန်မာ လှေလုပ်သားများကို ဥပဒေအ တိုင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ လုပ်အားခ၊ ထိုင်းလုပ်သားကာကွယ်စောင့် ရှောက်ရေးဥပဒေမှကာကွယ်ပေး ထားသည့်အခွင့်အရေးများရရှိ စေရန်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ် ကြောင်း လုပ်ခအနေဖြင့် တစ်လလျှင် ဘတ် ၁ဝဝဝဝ မှ ၁၂ဝဝဝ အတွင်းရရှိမည်ဖြစ်ကာ တစ်နေ့လျှင် ၁ဝ နာရီအနားပေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကဆိုထားသည်။
ထိုင်းတွင် ရေလုပ်သားလိုအပ် နေသည်ကိုသိရှိကြောင်း မြန်မာရေလုပ်သားများကို တရားဝင်ရေလုပ် သားများအဖြစ် ထိုင်းဥပဒေနဲ့အညီ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့် ခိုင်မာ သောလုပ်သားများဖြစ်ရန်လိုလား ကြောင်း ယင်းကြောင့် ထိုင်းနှင့်ပူး ပေါင်းပြီး အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေက တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့သည်ဟုသိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ငါးဖမ်းစက်လှေ လုပ်ငန်းများတွင် လူကုန်ကူးခံရမှု၊ လုပ်ခလစာခေါင်းပုံဖြတ်ခံရမှု၊ လူ ရောင်းစားခံရမှု အလုပ်နားချိန်မ ရှိဘဲခိုင်းစေမှု၊ အနိုင်ကျင့်ရိုက်နှက်ခံရမှု၊ အသတ်ခံရမှု စသည့်လူ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုများစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အပြင် အမေရိကန်နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည့် လူကုန်ကူးမှုဖြစ်ပွားသည့် နိုင်ငံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အစီရင်ခံစာအရ ထိုင်းနိုင်ငံငါးဖမ်းစက်လှေလုပ်ငန်းများသည် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုနှင့် လူကုန်ကူးတစ်ဆင့်ခံနိုင်ငံအဖြစ် လူကုန်ကူးမှု များစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်အတွက် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုအချို့ခံခဲ့ရခြင်း၊ ထိုင်းငါးဖမ်းစက်လှေ လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်သားရှားပါး ခြင်းတို့ကြောင့် ငါးဖမ်းမထွက်နိုင်ဘဲ လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းထားရသည့် စက်လှေပေါင်း သောင်းဂဏန်းအထိ ရှိနေသဖြင့် ယင်းလုပ်ငန်းရှင်များ၏ တောင်းဆိုချက်အရ ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ နိုင်ငံခြားသား လုပ်သားရှာဖွေကမ်းလှမ်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ ထိုင်းနိုင်ငံလှေလုပ်ငန်းများသို့ မြန်မာလှေလုပ်သား ၃၅ဝဝဝ ကျော် တရားမဝင်ရောက်ရှိနေပြီး ယင်းလုပ်သားများကို ထိုင်းအစိုးရမှ တရားဝင်ဖြစ်စေရေးဆောင် ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရမှု ဇေယျာဖြိုးကို သက်သေအဖြစ် ထပ်မံစစ်ဆေး
လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှု ရှိသည်ဆိုခြင်းကို တိုနီခရူးစ် လက်မခံ
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အတွင်းရှိ စားသောက်ဆိုင်များကို FDA ပထမဆုံးအကြိမ် ဝင်ရောက် စစ်ဆေး၊ ဆိုင်တစ?